Naruto lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Games Naruto eo ilay tovolahy - ny tena toetra ny maro Sariitatra, izay matahotra na inona na inona, ary vonona ny hanampy foana. Ary azo nilalao maimaim-poana amin'ny aterineto, ao amin'ny miaraka niainany, izay manana betsaka. Izy malaza niady mandresy ny fahavalo biby goavam-be, dia manangana isan-karazany ny fanatanjahan-tena, dia tsy matahotra ny hafainganam-pandeha sy ny Altitude. Tsy vahiny ho azy sy ny tantaram-pitiavana fihetseham-po sy ny ankizivavy dia afaka miaina ny virtoaly oroka azy, na hanatitra azy akanjo vitsivitsy amin'ny Fitafiana. Dia nandray anjara tamin'ny mahafinaritra maro lojika sy ny colorings, pyatnashek sy Puzzles. Indraindray dia toa ho lehibe, fa ny tsiky no nitsidika ny tsara tarehy tavany.
Ady amin'ny Village Leaf
Naruto Moto Foko
Ady maimaim-poana Naruto: Season 2
Ady maimaim-poana Naruto
Naruto farany mpihazakazaka tadio ninja farany
Lalao Naruto tamin'ny Category:
Farany Naruto lalao
Best Online Games Naruto nanangona eo amin'ny tranonkala pejy ho an'ny mpankafy ny kolontsaina Japoney
Lalao Online Rehetra Naruto lalao an-tserasera
Tsy Nanan-tahotra Ninja Naruto -Naruto
haiady nankeo aminay avy amin'ny firenena ny Atsinanana sy ny fanatanjahan-tena fikambanana, ankizilahy sy ankizivavy manao eo amin'ny samy Samy te hiady. Mifangaro ekipa mampiseho ankizilahy fa tsy mafy loatra, matetika fotoana very ny ankizivavy. Ary izay, kosa, mahatsapa eny an-dalambe ao amin'ny ora hariva kokoa ny antoka rehefa niverina an-trano avy amin'ny antoko iray. Ankehitriny antsoina hoe kanosa sy ny fiteny tsy hibebaka izy, ary ireo mpanarabiraby izy dia hieritreritra indroa vao hanafika ny tompon'ny mainty fehin-kibo. Ankehitriny, eo amin'ny ny tombontsoan'ny firaisana ara-nofo dia ny ara-drariny:
Ary raha izy no mirotsaka amin'ny karate, dia milalao ao Naruto dia tsy mahaliana azy latsaky ny anadahiny na ny mpiara-mianatra taminy.
Naruto - ny zazalahy izay nampianarina ny Ninja sekoly, ary mikasa ho tonga ny lohan'ny ny tanàna, nahazo ny fanajana ny ny mponina eo aminy. About Ninja malaza foana ary heverina nanao mazia. Olon-tsotra mihitsy aza gaga sy talanjona amin'ny inona no alacrity mihetsika izy ireo ka hamono ny niharam-boina. Nihevitra ny olona fa ireo miaramila niafina tarehy, ary nanao akanjo mainty foana, mety ho levona ao amin'ny rivotra, ka dia haingana nanjavona avy eo imasony. Raha ny marina aho, dia nanakorontana ny vokatry ny taona ny fiofanana. Izy ireo dia nampiofanina mba hamaly haingana ireo ny zava-misy amin'ny fanomezana hanohitra ny fahavalo, mba mianika an'ilay fiakarana, be manda, mihazona ny aina nandritra ny fotoana ela, hahatanteraka ny fampiasana ny fitaovam-piadiana, mba hampivelatra mandre sy ny fahitana, mamela ny Ninja mba hihaino ny kely rustle ka jereo ao amin'ny maizina.
Ninja - dia, raha ny marina, nanakarama mpamono olona, ​​izay mampiasa ny asa raha nanana olona hanala na hamatotra raharaha. Izy ireo masiaka, matanjaka sy manam-paharetana, ary ao ny zava-nitranga ny loza tsy nisalasala hamono tena, fa tsy mba homena ny voafonja. Ny zavatra izao hanolotra azy amin'ny endrika kokoa ny tantaram-pitiavana, ary nanomboka nieritreritra kosa dia tahaka ny olona tsirairay, sy ny fahaizany mba hanana io dia azo jerena ho an'ny rehetra. Tsarovy mpianika izay mandresy tampon-tendrombohitra, ary tsara kokoa lamaody fironana parkour, izay olona tsy misy fiantohana mba handresy vato misakana eny an-dalambe tao an-tanàna amin'ny hafainganam-pandeha avo. Inona no tsy Ninja?
Mahatsapa toy ny tena Ninja, milalao lalao Naruto
Amin'ny niverina anareo ho amin'ny Naruto lalao an-tserasera, dia te-hampiditra ity akaiky tanora. Na dia eo aza ny zava-misy fa izy mbola zaza, dia hita mazava tsara tombo-kase ny kilasy ao amin'ny sekoly sy ny traikefa azo tamin'ny ady taloha. Mpiady mahery fo ity. Iza no tsy miafina ambadiky ny namana ary mijoro eo amin'ny lohalaharana raha olona iray no tandindomin-doza. Tsy maintsy mandeha amin'ny alalan'ny be dia be ny ady izay mpiray, fiara Naruto, dia ho aminy iray.
Toy ny rehetra ny goodies, ary Naruto manana ny fahavalony. Zabuza - ny ratsy indrindra ny tanora lahy fahavalo ary tsy nitsahatra ny fitaka. Niady tamin'ny sabatra na hanafanana melee izany, fa na dia tsy manana fitaovam-piadiana mahafaty, dia afaka manomboka hanipy snowballs na vatomamy. Pranks jaza mihitsy aza izy hivadika ho fanoherana ka tsy azo tsinontsinoavina.
Ao amin'ny iray dikan-tenin'ny aterineto lalao Naruto tsy maintsy hamaha ny piozila ny hahita izany Naruto. Indray mandeha indray aho zabuza namely ny mahery fo sy cloned. Nahazo ny handresy ihany rehefa mahita ny diso rehetra Naruto afaka ny famosaviana ny marina. Na dia ankizivavy sy andevozin'ny hiady, fa indraindray aza zahazhivayut amin'ny fizarana toy ny akanjo ny amin'ny kely indrindra mba akanjo nandritra ny lalao tselatra Naruto. Ihany koa ny milalao ny lalao an-tserasera Naruto afaka amin'ny Puzzles sy fandokoana pejy, karohy zavatra, ary samy hafa ny tsiroaroa ny mitovy sary.